Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Duqayn Cirka Ah Ku Qaaday Al-Shabaab.
Maraykanka oo Duqayn Cirka Ah Ku Qaaday Al-Shabaab.
Posted by ONA Admin	/ September 7, 2017
Weerar loo adeegsaday diyaarad Drone ah oo uu Mareykanku leeyahay oo ka dhacay meel ka mid ah gobolka Bay ayaa la sheegay in lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay subaxnimadii talaadadii lasoo dhaafay.
Afhayeen u hadlay AFRICOM, Anthony Falvo, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press (AP) in meesha la duqeeyey aysan ka ag dhaweyn dad rayid ah, wuxuuna sheegay in weli aysan heynin magacyada ragga ka tirsan Al-Shabaab ee ku dhintay iyo darajadooda.
Waxa uu sheegay in maleeshiyada la beegsaday ay halis ku hayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Africa ee gobolkaas ka howlgalaya kana dhowaa meesha ay duqeyntu ka dhacday. Mareykanka ayaa fuliyay weeraro dhowr ah oo ka dhan ah Al-Shabaab tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ansixiyay ballaadhinta howlgallada Mareykanka ee Somalia ee ka dhanka ah Al-Shabaab.